ထိုင်းနိုင်ငံ AIT School of Managementရှိ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘွဲ့လွန်ပရိုဂရမ်များကို ပညာသင်ဆုပမာဏ (၈ဝ%)ဖြင့် သင်ကြားခွင့်ပေးအပ်သွားမည်... - Crown Education
Jul 23, 2020 News, Scholarships
မြန်မာကျောင်းသား/သူတွေကြား နာမည်ရလူသိများတဲ့ AIT School of Management တွင်-
Master/ M.Sc. in International Finance
Master/ M.Sc. in Business Analytics & Digital Transformation
PhD in Management (PhD) ဘွဲ့လွန်ပရိုဂရမ်များကို ပညာသင်ဆုပမာဏ ၃ဝ% မှ ၈ဝ% အထိ လျှောက်ထားခွင့်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး IELTS Overall Band Score (6.0)၊ ဘွဲ့လက်မှတ်၊ အမှတ်စာရင်းများဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ AIT School of Management ရှိ ပညာသင်ဆုနှင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် CROWN Education Yangon Office – အမှတ် ၂၇၅ ၊ ၃ လွှာ၊ ကမ္ဘောဇတာဝါ ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ✆ ဝ၉ ၉၇၇ ၉၇၇ ၂ဝဝ၊ ဝ၉ ၄၄ ၅၅ ၆၆ ၇ဝ၁နှင့် CROWN Education Mandalay Office – အမှတ် စီ-၅၊ ၆၅လမ်း၊ ၃၁လမ်းနှင့် ၃၂လမ်းကြား၊ ရတနာမန္တလေး အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ✆ ဝ၉ ၉၇၅ ၈ဝဝ ၈ဝဝ၊ ဝ၉ ၄၅ဝ ၂ဝဝ ဝ၈ဝ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း သတင်းစကားပါးလိုက်ပါတယ်။
Bachelor of Architecture ပရိုဂရမ်ကို (၅)နှစ်စာ ပညာသင်ဆုအပြည့်ဖြင့် သင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့သည့် မနန္ဒာဝင်းပြည့်အောင်